gnome Wood | cha cha UK
Gnome Wood bụ otu n'ime kacha mma free online ohere mpere wepụtara site Rab Cat. Ọ nwere otu nnukwu imewe na-ele ihe anya. Ebe a na egwuregwu nwere ike na-eleta a lush na serene ọhịa, na pụkwara irite ụfọdụ nnukwu Enwee Mmeri na usoro. Nke a kacha mma free online ohere mpere game dị gafee niile ngwaọrụ, and is playable from a minimum bet of £0.25 upto a maximum bet of £50.00. Ọ na-abịa a nkọ gameplay na abụọ ọwọrọiso bonus atụmatụ.
Ịbịa sonyere kacha mma free online ohere mpere!!
Nke a oghere na-abịa na 5 esi anwụde, 3 ahịrị na 25 ofu paylines, na ndị a na-esi anwụde nwere ụfọdụ ndị na-esere ihe. Ọ na-megide a backdrop featuring a mara mma ọhịa jupụtara osisi, ụkpụrụ na toadstools.
The elu uru akara nkejikotara nke a harnessed oke, a akwụkwọ, a cauldron, a gnome nakwa dị ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na pink agba ịchọ mma. Ọzọkwa, site ọdịda 5 nke gnome akara na paylines, Player ga-eme 10 n'oge ha na-eto. ebe, 4 na-agba ọsọ-style nnọchianya nke iche iche na agba dị ka odo, oroma, green na-acha anụnụ anụnụ na-ewere dị ka ala ụkpụrụ.
Ọzọkwa, abụọ ọhịa nnọchianya nke a kacha mma free online ohere mpere game, bụ Wild na Wild × 2. Ọ ga-anọchi ndị ọzọ niile na akara iche si Free spins ikposa akara, iji na-etolite na-emeri ihe n'ịgwa. The RTP bụ 96.16%.
Beneficial Daashi Akụkụ nke GNOME Wood!
The abụọ ọhịa nnọchianya nke a kacha mma free online ohere mpere game, nwere ma yiri ike, na-egosi naanị otu ugboro na-esi anwụde 2 ka 5. na, mgbe ọ bụla ha ime, Player ga-enweta a free atụ ogho na mgbe anụ ga-ịgbanwee 1 ọnọdụ kwupụta ekpe. Ọzọkwa, usoro a ga-anọgide na ruo mgbe anụ esịmde ukwu otu. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na mmezi nọmba nke wilds-eme n'oge a na-adọ, mgbe ahụ free spins ga-ebu on.
Nke a na atụmatụ ga-triggered site ọdịda 3 ma ọ bụ karịa Free spins achụsasịkwa oyiyi, n'ebe ọ bụla na-esi anwụde. The egwuregwu ga-now nweta 10 free spins ibido. Ọzọkwa, na wagharịrị wilds ga-egosi na ọ bụla na-esi anwụde n'oge a gburugburu, iji mee ka ọnụ ọgụgụ nke ndị spins. Ọzọkwa, ọzọ spins ga-triggered site ọdịda 3 ma ọ bụ karịa ikposa oyiyi ọ bụla na-ele.
Nke a kacha mma free online ohere mpere bụ a omume ọma wuru otu Rab Cat. Ọ nwere elu-definition ndịna, visual aghụghọ na ọbụna ihe autoplay feature. Nke a oghere egwuregwu na-enye a ezi uche Ịgba Cha Cha ahụmahụ, na a ole na ole mara mma Enwee Mmeri. Ruru ya mfe-to-eso ntụziaka, Gnome Wood na-eme nke ọma n'etiti oghere Fans gafee n'ụwa.